नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १०४२
पत्र पत्रिका प्रकाशित: २०७७-२-१५ गते २७५ पटक हेरिएको
नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १०४२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा १५६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले थप १५६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
योसँगै ५१ जिल्लाका एक हजार ४२ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।कुल संक्रमितमध्ये ९४० जना पुरुष र १०२ जना महिला हुन् ।
यसैबीच, कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट थप एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२२, बुङमतीका ५६ वर्षीय पुरुषको किस्ट अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
पहिलेदेखि नै कलेजोसँग सम्बन्धित रोगले ग्रसित उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच पुगेको छ ।
यस्तै, वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत् चारजना संक्रमित ‘डिस्चार्ज’ भएका छन् । योसँगै हालसम्म १८७ जना निको भएका छन् ।